DHAGEYSO:Dowlada Soomaaliya oo ku dhawaaqday Xaalad deg deg ah oo Ayaxa ka dhalatay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Dowlada Soomaaliya oo ku dhawaaqday Xaalad deg deg ah oo Ayaxa ka...
DHAGEYSO:Dowlada Soomaaliya oo ku dhawaaqday Xaalad deg deg ah oo Ayaxa ka dhalatay
Madaxda Wasaaradda Beeraha dowlada dhexe ee Soomaaliya oo kulan deg deg ah la qaatay masuuliyiin ka socday wasaaradaha Beeraha Maamul goboleedyada ayaa ka hadlay dhibaatooyinka oo keenay Ayaxa Faraha badan eek u degay deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya ka mid ah.
Wasaarada beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku aadan Ayaxa maadaama uu ku degay dhulbaaxadweyn oo isugu jira dhul beereed iyo dhul daaqsimeed.
Ayaxa oo dalagyo badan baabi’iyay ayaa sababay Cuno yari waxayna saamayn ku yeelatay qoysas badan oo noloshoodu ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha.
Saamaynta hada taagan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah sida ay wsaarada Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya sheegtay Roobabkii dayrta oo ka hoos maray heerkii laga filayay,daadadkii iyo fatahaadihii Saameeyay dhul beereed baaxad leh iyo qodobo kale.
Wasiirka wasaarada beeraha iyo waraabka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay adkaan doonto ka Saarida ayaxa ku dagay gobolada Koonfureed maadaama ay halkaasi tahay dhul beereed leh waxkasta oo ayaxu soo raacayo.
Previous articleDHAGEYSO:Gudiga hay’ada duulista Soomaaliya oo sheegay inay shaqadooda tayaynayaan
Next articleMaamulayaasha dugsiyada hooyga leh oo lagu amray in ay habeenkii ardayda tirokoob ku sameeyaan